Mamoaka ny herin 'Andriamanitra amin'ny vavaka - Church of God of Switzerland Switzerland
haino aman-jery > Journal succession > 2015-04 mpandimby ny Magazine > Avoahy ny herin'Andriamanitra amin'ny vavaka
Manana saina maro momba an'Andriamanitra ny olona ary tsy voatery ho marina ny maro. Raha marina ny tenin'i Tozer ary tsy mety ny fisainantsika momba an'Andriamanitra, fa ny zavatra manan-danja indrindra momba antsika dia ratsy koa. Ny hadisoana lehibe amin'ny fisainana an'Andriamanitra dia mety hahatonga antsika hiaina ao anatin'ny tahotra sy ny fahamelohana ary hitarika ny hafa hieritreritra momba an'Andriamanitra.
Izay eritreretintsika momba ny vavaka dia milaza betsaka momba izay eritreretintsika momba an 'Andriamanitra. Rehefa mieritreritra isika fa ny atody am-bavaka no fitaovana hahazoana zavatra avy amin'Andriamanitra, dia lasa boaty faniriana any an-danitra ny fiheverantsika an'Andriamanitra. Rehefa manandrana manao raharaham-barotra miaraka amin'Andriamanitra isika dia lasa mpanan-karena Andriamanitra izay misokatra amin'ny fifampiraharahana ary tsy mitandrina ny fifanarahana sy fampanantena. Raha mijery am-bavaka ny karazana fampifaliana sy fihavanana isika, dia kely sy tsy mitanila Andriamanitra ary tsy maintsy afa-po amin'ny tolotra ataontsika alohan'ny hanaovany zavatra ho antsika. Ireo fomba fijery rehetra ireo dia mampidina an-tsehatra antsika Andriamanitra ary mampihena azy amin'ny olona iray izay tokony hieritreritra sy hanao zavatra toa antsika - Andriamanitra noforonina hitovizantsika. Ny finoana iray hafa momba ny vavaka dia rehefa mivavaka (marina) isika dia hamoaka ny herin'Andriamanitra ny fiainantsika sy an'izao tontolo izao. Raha ny marina, rehefa tsy mivavaka tsara isika na rehefa manakana antsika ny fahotana dia mihazona an'Andriamanitra isika ary manakana azy tsy hanao zavatra mihitsy. Ity eritreritra ity dia tsy vitan'ny hoe mandoko sary hafahafa andriamanitra amin'ny gadra vy izay fehezin'ny hery matanjaka kokoa, fa mavesatra be koa eo amin'ny sorontsika. Tompon'andraikitra isika raha tsy sitrana ilay olona nivavahantsika ary hadisoantsika raha sendra lozam-pifamoivoizana ny olona iray. Mahatsiaro ho tompon'andraikitra isika rehefa tsy tonga ireo zavatra tiantsika sy irintsika. Tsy Andriamanitra intsony no ifantohana fa ny olona mivavaka, ary mamadika ny vavaka ho ezaka feno fitiavan-tena.
Ny Baiboly dia miresaka momba ny vavaka kilemaina eo amin'ny sehatry ny fanambadiana (1. Petrus 3,7), fa tsy amin’Andriamanitra, fa amintsika satria sarotra amintsika matetika ny mivavaka noho ny fihetseham-pontsika.Tsy miandry antsika hanao vavaka marina Andriamanitra mba hahafahany manao zavatra. Tsy izy akory ilay ray izay mitahiry zava-tsoa amin’ny zanany mandra-pamoakan’izy ireo ilay “teny ody”, toy ny raim-pianakaviana miandry ny “azafady” sy “misaotra” amin’ny zanany. Tena tian’Andriamanitra ny mihaino ny vavaka ataontsika. Mihaino sy miara-miasa amintsika tsirairay avy izy, na inona na inona mahazo ny valiny tadiavintsika na tsia.
Rehefa mitombo amin'ny fahalalana ny fahasoavan'Andriamanitra isika, dia toy izany koa ny fijerintsika Azy. Rehefa mianatra bebe kokoa momba azy isika dia mila mitandrina ary tsy mandinika izay rehetra reko momba azy ho fahamarinana lehibe indrindra, fa fitsapana fanambarana momba an'Andriamanitra, ny fahamarinan'ny Baiboly. Zava-dehibe ny mahatsapa fa ny fiheverana diso momba an'Andriamanitra dia miely amin'ny kolontsaina malaza sy ny Kristiana ary manambany ny tenany ho fahamarinana marina.
Tia mandre ny vavaka ataontsika Andriamanitra. Tsy miraharaha azy raha mampiasa ny teny tsara isika. Nomeny antsika ny fanomezan'ny vavaka mba hahafahantsika mifandray aminy amin'ny alàlan'i Jesosy ao anaty Fanahy Masina.